दाङमा कोरोनासँग जुधिरहेका ‘सारथिहरु’ - Jagaran Post
दाङमा कोरोनासँग जुधिरहेका ‘सारथिहरु’
जागरणपोस्ट २७ बैशाख २०७८, सोमबार १४:४२
तुलसीपुर : जिल्लामा कोरोना सङ्क्रमित तीव्ररुपमा बढिरहेका छन् । समुदायस्तरमै कोरोना भाइरस फैलिएपछि दाङमा हाल बन्दाबन्दी (लकडाउन) नै गरिएको छ । यसअघि वैशाख २५ गतेसम्म गरिएको लकडाउनलाई जेठ १ गतेसम्म थप गरिएको छ ।
एकातिर कोरोनाले सताएको छ, अर्कोतर्फ लकडाउनमा न्यून आय भएका गरिब तथा पिछडिएको समुदायका नागरिकलाई भने जीवन धान्न निकै नै गाह्रो हँुदै गएको छ ।
यस्तो अवस्थामा कोरोनालाई जित्ने आत्मविश्वासका साथ जिल्लाका भने सबै नागरिक नै लागिपरेका छन् । सायद यसैकारण हुनसक्छ यहाँ विगतको वर्षजस्तो लकडाउन उल्लङ्घन भएको छैन । आवश्यक काममा बाहेक मानिस बाहिर निस्किएका छैनन् । लकडाउन पालना गर्ने सन्दर्भमा यतिखेर सबै सकारात्मक देखिएको इलाका प्रहरी कार्यालय तुलसीपुरका प्रहरी सहायक निरीक्षक रमेश बुढाथोकीले बताए । “अहिले विगतको जस्तो अवस्था छैन, धेरैजना अति आवश्यक काममा मात्रै निस्किने गर्नुहुन्छ”, उनले भने “पछिल्लो पटकको कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण अलि कडा खालको भएर पनि होला, सबैजना सजग हुनुहुन्छ ।”
कोरोना सङ्क्रममितको पनि दरिलो आत्मवल रहेको पाइएको छ । धेरैजना सङ्क्रमित अहिले घरैमा एकान्तबास (होम आइसोलेसनमा) छन् । घरैमा एकान्तबासबाटै पत्रकार सङ्गीत बस्याल सामाजिक सञ्जालमा लेख्छन् ‘‘छातीको हल्का दुखाई, खोकी र कमजोरी बाहेक समस्या छैन, मसँगै आमालाई पनि पोजेटिभ देखिएको थियो । आमालाई पनि राम्रो हुँदैछ, हामी खतरामुक्त छौँ ।”
घरैमा एकान्तबासमा होस् वा अस्पतालमा भर्ना भएका सबै सङ्क्रमितको हेरचाहमा खटिने स्वास्थ्यकर्मी रातभर नसुतेरै सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । यसले पनि सङ्क्रमितको आत्मबल बढेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका जनस्वास्थ्य निरीक्षक विमल केसी भन्छन् “राति जतिबेला फोन आउँछ, त्यतिबेलै जनताका घरमा पुगेर सेवा गर्नुपर्छ ।” सङ्क्रमितको मात्रै होइन, स्वास्थ्य अधिकारीसँग जानकारी लिनेको फोन उठाउन पनि भ्याई–नभ्याई हुन्छ । उनी भन्छन् “मेरो आफ्नै मान्छेलाई जसरी हुन्छ बेड मिलाई दिनुप¥यो, पीसीआर रिपोर्ट के छ, पीसीआर टेष्ट कहाँ हुन्छ, अक्सिजन लेभल घट्यो औषधी के खाने, तुरुन्त एम्बुलेन्स चाहियो, शब ब्यबस्थापनका लागि गाडी चहियो, एउटा अक्सिजन सिलिण्डर मिलाइदिनु प¥यो’’, यस्तै आग्रहका लागि बढी मात्रामा फोन आउने गरेको छ ।
कोरोना अस्पताल बेलझुण्डीका व्यबस्थापक दोर्ण ओलीलाई पनि यस्तै फोन धेरै आउछन् । उनी भन्छन् “बेड मिलाइदिनु प¥यो, अक्सिजन मिलाई दिनुप¥यो, भनेर रातभर फोन आउछन् ।” एकसय शय्या थप गरेपछि पाँचसय भन्दा बढी अक्सिजन सिलिण्डर आवश्यक पर्ने हो तर अहिले तीनसय हाराहारीमा मात्रै सिलिण्डर छन् । त्यसले गर्दा जति फोन आउछन्, ती सबैलाई शय्या उपलब्ध गराउन नसकिएको दोर्ण स्वीकार गर्छन् । जनशक्ति पनि सीमित छ । डाक्टरसहित छ जना कर्मचारीले सबैतिर भ्याउनुपर्ने भएकाले राति पनि सुत्न पाइने अवस्था नरहेको उनी बताउँछन् ।
स्वास्थ्यकर्मीलाई जति फोन आउछन्, एम्बुलेन्स चालकलाई पनि त्यतिकै फोन आउछन् । अहिले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका केही एम्बुलेन्स चालकमा कोरोना देखिएपछि उनीहरु उपचारमा छन् । त्यसैले ती एम्बुलेन्समा बाहिरका चालकले चलाएर भए पनि नियमित सेवा दिनुपर्ने अवस्था छ । तीमध्येका एक सवारी चालक हुन्, मोहन पौडेल । उनी नेकपा एमालेको दाङको युवा नेता हुन् । राजनीतिलाई समाजसेवाका रुपमा लिने मोहन पेशाले सवारी चालक हुन् । तिनै मोहन अहिले उपमहानगरपालिकाको एम्बुलेन्स चलाएर सहयोग गरेका छन् । यस कार्यका लागि उनले कुनै पारिश्रमिक लिएका छैनन् । “राति पनि फोन आउछ, राति नै एम्बुलेन्स चलाउन जानुपर्छ, खाना खाने समय पनि मिल्दैन”, उनले भने “यस्तो कोरोनाको बेला सबैले सक्दो सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो, त्यहीअनुसार मैले उपमहानगरपालिकालाई सहयोग गर्दै नागरिकको सेवा गर्दै आएको छु ।”
एम्बुलेन्स चालक सङ्क्रमित भएर उपचारमा गएपछि तुलसीपुरमा एम्बुलेन्स चलाउने व्यक्ति नहुँदा सङ्क्रिमितलाई ओसार–पसार गर्न समस्या भएपछि मोहनको सहयोग लिइएको तुलसीपुर उपमहमानगरपालिकाका कार्यपालिका सदस्य दीपक कुमाल बताउँछन् । “तुलसीपुरका सङ्क्रमित तथा लक्षण देखिएका बिरामीलाई कहिले घोराही, कहिले बेलझुण्डी अस्पताल त कहिले उपचार सकेर घर पठाउन निकै समस्या भयो”, उनले भने “त्यसैले अहिले हामीले मोहनको साथ लिएका हौँ ।”
मोहनले अहिले घरमै अक्सिजन पु¥याउने, अक्सिजन फिट गरिदिने कार्य पनि गरिरहेका छन् । त्यतिमात्रै होइन उपमहानगरपालिकाको एम्बुलेन्स अन्य स्थानमा व्यस्त भएमा अरु कुनै एम्बुलेन्स खोजेर भएपनि बिरामीलाई सम्बन्धित ठाउँमा पठाउन पहल गर्दै आएका छन् । यतिबेला कोरोनालाई जित्न सरकारलाई सबैतिरबाट सहयोग छ । सबै मिलेर कोरोना जित्नुपर्छ भन्ने मान्यताका साथ समाजसेवीले पनि सहयोग गर्दै आएका छन् । आफूले सक्दो सहयोग सबैतिरबाट हुने गरेको छ ।
अहिले एम्बुलेन्स सबैतिर पुग्ने अवस्था पनि छैन । पुगेपनि बिरामीले महङ्गो रकम तिर्नुपर्ने अवस्था छ । यसलाई अन्त्य गर्न तुलसीपुरका युवाले उपमहानगरपालिका भर पुग्ने गरी अटोरिक्सा सञ्चालन गरेका छन् । तुलसीपुरका युवा व्यबसायी मोहन सुनार, सुनिलबाबु डाँगी, अजय दुलाल लगायतको टोेलीले तुलसीपुर उपमहानगरपालिकासँग सहकार्य गरेर सस्तो भाडा लिने गरि नौवटा अटोरिक्सा परिचालन गरिएको छ । मोहन भन्छन् “ती अटो रिक्साले एम्बुलेन्सकै काम गर्नेछन् ।” सङ्क्रमितलाई एक स्थानबाट अर्को स्थानमा लैजानका लागि ती रिक्सा प्रयोग गरिने उनको भनाइ छ । यो कार्यक्रम उपमहानगरपालिकाले संयोजन गरेको उपमहानगरपालिकाका एम्बुलेन्स सञ्चालन समितिका संयोजक तथा कार्यपालिका सदस्य दीपक कुमालले बताए ।
जेसिजका पूर्वअध्यक्ष एवं स्थानीय व्यवसायी पदमप्रसाद पोखरेललाई उपमहानगरपालिकाले घरमै एम्बुलेन्स पठाउने जिम्मा दिएको छ । उनी पनि रातदिन नभनी जतिबेला फोन आउछ घरमा गएर अक्सिजन पु¥याउँछन् । उनलाई तुलसीपुर नगर जेसिजका अध्यक्ष नारायण भट्टराईले सहयोग गरेका छन् ।
अहिले जेसिजले अभियानकै रुपमा अक्सिजनका लागि रु एक हजार सहयोग अभियान सञ्चालन गरेको छ । सो अभियानबाट सङ्कलन भएको रकम अक्सिजन खरिद गरिने छ ।
जेसिजले रक्तदान अभियान पनि जारी राखेका छ । लकडाउनका बेला जसलाई जतिबेला रगत आवश्यक पर्छ, त्यतिबेला नै जेसिजले रक्तदान गर्ने गरेको छ । त्यसकालागि रक्तसञ्चार केन्द्रमा जेसिजका प्रत्येक सदस्यको फोन नम्बर, रगत समूहसहितको विवरण सार्वजनिक गरेको छ । जुन रगत आवश्यक पर्छ, त्यही व्यक्तिलाई फोन गरेमा तत्काल सहभागी भएर रगत दान गर्ने अध्यक्ष नारायण भट्टराईले बताए । “जतिबेला रगत आवश्यक पर्छ, त्यतिबेलै जेसिज हाजिर हुन्छ,” उनले भने “त्यसका लागि हामीले सम्पूर्ण विवरण रक्तसञ्चार केन्द्रमा उपलब्ध गराएका छौँ ।”
यहाँका हरेक क्षेत्र र समुदायका नागरिकले महामारीका विरुद्धमा समाजसेवा गरेका छन् । आफ्नै गाडी प्रयोग गरेर प्रत्येक घरमा अक्सिजन पु¥याउने कार्यमा क्रियाशिल हुनुहुन्छ व्यवसायी जनक खराल । उनी भन्छन् ‘‘मुलुक सङ्कटमा परेको बेला हरेक नागरिक सामाजिक सेवामा खटिनुपर्छ ।”
नेपाल पत्रकार महासङ्घ दाङको टोली पनि उत्तिकै खटेको छ । अध्यक्ष दुर्गालाल केसीका अनुसार पत्रकार महासङ्घ दाङको हलमा छ शय्याको आइसोलेसन कक्ष निर्माण गरिएको छ । जहाँ पत्रकार तथा ‘फ्रन्टलाइन’ मा खट्नेलाई राखिने छ । अहिले अक्सिजन ल्याउने पहल भइरहेको केसीले बताए ।
दाङमा पनि कोरोना भाइरसको महामारीले ठूलो असर गरेको छ । यहाँ प्रत्येक दिन सङ्क्रमित हुने र मृत्यु हुनेको सङ्ख्या थपिएको छ । नेपालगञ्जको नजिक भएर पनि होला दाङ जिल्लामा पनि यो महामारीबाट अति प्रभावितमा नै परेको छ । त्यसैले यहाँ धेरै नागरिक आफ्ना क्षेत्र र समुदायबाट महामरीको विरुद्धमा खटिरहेका छन् र यस कार्यमा खट्नेमध्येका यी केही प्रतिनिधिपात्र हुन् । जनप्रतिनिधि, स्वास्थ्यकर्मी, सुरक्षाकर्मी, समाजका अगुवा, सञ्चारकर्मी, समाजसेवीले आ–आफ्नो ठाउँबाट महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा पनि सङ्क्रमितको आत्मवल बढ्दै गएको महसुस यहाँ गरिएको छ ।
स्थानीय तहले अहिले सङ्क्रमितलाई सचेत रहन आग्रह गर्दै आएका छन् । “आवश्यक परेमा हामी घरमै आउछौँ, हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला”, बबई गाउँपालिका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले आह्वान गरे “हजुरहरु अनावश्यक घरबाहिर भने ननिस्किदिनुहोला ।”
कोरोना सङ्क्रमितको संख्या दिनप्रतिदिन बढेपछि जिल्लामा लकडाउनको अवधि थपिएको छ । यस जिल्लामा जेठ १ गतेसम्म लकडाउन हुनेछ । त्यो बीचमा प्रत्येक बैंकले दुई÷दुई दिन सेवा दिन पाउने भएका छन् । यो बीचमा प्रत्येक उपमहानगरपालिकाले दुई÷दुईसय र गाउँपालिकाले एक÷एक सय अक्सिजन सिलिण्डर खरिद गर्ने निर्णय भएको छ । सबै स्थानीय तहले आफ्नै अस्पताल सञ्चालन गर्नेगरी तयारी पनि थालेका छन् ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउन समस्या
पहिरोले घर पुरिँदा पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा किशोरको मृत्यु
मेलम्ची र इन्द्रावती खोलामा आएको बाढीले मेलम्ची क्षेत्र
वाग्मती प्रदेशमा रु. ५७ अर्ब ७२ करोडको बजेट
नारायणी नदीले पार गर्यो खतराको बिन्दु !
कर्णाली सरकारद्वारा रु. ३६ अर्ब ५४ करोडको बजेट
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार द्वारा ३० अर्ब ३३ करोडको
१.भारतमा दैनिक सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिनप्रति दिन घट्दो
२.बाढी-पहिरोले देशका विभिन्न स्थानमा पुर्याएको क्षति तस्बिरमा हेर्नुहोस्
३.सर्वोच्चको आफ्नै आदेश परिवर्तन, निषेधाज्ञामा कर उठाउन पाउने
४.६५ किलो गाँजासहित ट्रक चालक पक्राउ
५.संसदभित्रै गाली–गलौज र हानाहान, भिडियो भयो भाइरल
६.हेमोग्लोबिन कम भएपछि नेता खनाललाई दिल्ली लगिंदै
७.इजरायद्वारा गाजा क्षेत्रमा हवाई आक्रमण
८.नारायणी नदीको सतह इतिहासकै उच्च विन्दुमा
९.मध्यपहाडी लोकमार्ग खुलाउन समस्या
१०.पहिरोले घर पुरिँदा पाल्पाको रिब्दीकोट गाउँपालिकामा किशोरको मृत्यु
चुरे दोहन नीति तुरुन्त खारेज गर
नेपालको दक्षिणी भागमा पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म फैलिएको, कमजोर र पत्रे चट्टानले बनेको भू-भाग नै चुरे क्षेत्र हो। हालको संरचना अनुसार देशको सातै प्रदेशमा पर्ने
जागरणपोस्ट २१ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०८:०२
साढे १६ खर्बको चुनावी घाटा बजेट
जागरणपोस्ट १६ जेष्ठ २०७८, आईतवार ०२:४१
अराजनैतिक संस्कार, विवेकहीन निर्णय
जागरणपोस्ट ८ जेष्ठ २०७८, शनिबार ०८:०५
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री – संविधानका रक्षक कि भक्षक?
जागरणपोस्ट ७ जेष्ठ २०७८, शुक्रबार ०७:५७